SomaliTalk.com » Qaadista Caruurta iyo sharciyada la xariiro
Wadamada Reer Galbeedka, haddii aad isha wada mariso, sharciyada la xariiro caruur qaadista, waa ay isu wada dhawyihiin dhamaantood, runtii waxaa la oran karaa, waa ay kala amaahdeen, meelo yar yar ma ahane oo waddan walba si gaar ah xeerka ugu dhuujiyay ama ugu dabciyay.
Haddii aan tusaale u soo qaadano waddanka Denmark oo dadka ku nool ay yihiin 5.500000, waxaa jiro qiyaastii caruur tiradooda ay gaareyso 14.000 afar iyo toban kun, oo ku nool meelo ka baxsan hooyga waalidiintood, 10 % boqolkiiba, waa ilmo guriga waalidkood, xoog looga kaxiiyay, haddii aan qaab kale u dhigno, 1.400 kun iyo afar boqol oo ka mid ah, ayaa waalidiintood xoog looga kaxeystay, markii ay dowladdu ( dowladda hoose) ku qiimeysay, in ilmaha dhib weyn soo gaarayo, xag jir ahaaneed, maskax ahaaneed iyo guud ahaan caafimaadka ilmaha, haddii waalidkiisa la sii noolaado.
Hadaba maxaa keeno in waalid ilmahii uu dhalay laga qaado, waxaa keeno, asbbaabo badan, tusaale ahaan, waxaa ugu badan, marka aad dib u raacdo, kiisaska la xariiro ilmo qaadista, in waalidka ilmaha garaaco, khamriga iyo guud ahaan wax-yaabaha maanka dooriyo isticmaalo, in dhimir xanuun heleelo, sida waalida iyo xanuunada la xariiro iyo in ilmaha laftiisa la yimaado dhaqan xumo, sidoo kale qabo xanuun xagga jirka ah ama dhimirka oo markaa waalidka buuxin karin baahida ilmaha.
Ilmo in waalid laga qaado shirciga xaggiisa, ma ahan wax sahlan, waana jidka ugu dambeeyo ee ay dowladda hoose isticmaasho, taa waxaa ay ka dhigantahay, in marka hore la raadiyo qaabkii qooyska iyo ilmaha lagu caawin lahaay, hadba ayada oo la qaadayo wadiiqo walba oo xal ah.
Hadaba haddii ay dhacdo in waalid Somaliyeed ay la soo xariiraan, qeybta caruurta ee degmada uu deganyahay, dhib ku saabsan qoyska iyo caruurta darteed, waxaa muhiim ah in qofka waalidka ah muujiyo wadashaqeyn fakta horaba, sidoo kalana qarsan dhibka haysto, lana xariiro, dadka Somalida ah ee nidaamka iyo dhaqanka waddanka garanayo iyo looyaradaba, si loo siiyo talooyin uu uga gudbo dhibka markaa taagan oo loo helo xal ay ku wada shaqeyaan, qoyska iyo qeybta caruurta, inta kiiska furanyahay.
Waa muhiim, in waalidka dadaal walba sameeyo inta ay ilmaha gacantiisa ku jiraan, mar haddii ay ilmaha gacanta ka baxaan, wali rajo weyn ayaa jirto in ilmaha waalidka dib u hanto, waa haddii asbaabtii keentay qaadista, meesha ka baxaan, hadana ma ahan wax sahlan, waa dariiq dheer.
Ilmahii la qaaday xaalkiisu maxuu noqon dhaqan ahaan?
Xuquuq ayuu leeyahay, ilmaha ka soo jeedo dadyoowga laga tiro badan yahay, ee ku nool Reer galbeedka, sida Somalida oo kale, xuquuqdaa waxaa ka mid ah in aan ilmihii loo diidi karin, la nalooshaha dadka ay isku diin iyo dhaqan wadaagga yihiin, si uu diintiisa iyo afkiisa hooye u dhumin ilmahii, arrinkaan asaga ah, waa mid ku xussan heshiiska UN ee la xariiro, xuquuqda caruurta qodobkiisa 30aad.
Isticmaalka qodobkaan, waalidiin badan iyo ehelka guud ee caruurta kuma baraarugsano in ay cuskadaan, marka aad ayeey muhiim u tahay in waalidka iyo ehelka caruurtaba, dalbadaan in ilmaha loo geeyo qoys ay isku dhaqan yihiin, haddii la waayo dad nocaa ahna, in ay ilmaha helaan dad dhaqankooda iyo afkooda baro.
Ugu dambeyntii, ka sharci yaqaan ahaan, waxaan bulshadda Somaliyeed kula talin, in dhibka keenayo caruur qaadashada inta uusan imaan laga wada hortago, oo waalidkii xanuunsan, la wado caawiyo daris iyo ka jaaliyad ahaanba.
Haddiisa ay dhacdo in ilmihii qooyska la qaato, yaan la isku mashquulin banaan baxyo, banaan bax, waxuu wax ka badali karaa, arimaha la xariiro siyaasad iyo waxii hindisa ah ee soo food leh, ilmo la qaaday, waxaa lagu qaaday sharci dagsan iyo maxkamad, marka maxkamad haddii aad banaan baxdo iyo haddii kale dhag jalaq uma siineyso, marka laga hadlayo go’aan qaadashada.